जब नदीमा कछुवाको तुफान आयो | Himalaya Post
जब नदीमा कछुवाको तुफान आयो
Posted by Himalaya Post | ५ पुष २०७८, सोमबार ०६:५८ |
काठमाठौं – अजीव विश्वमा अनेक किसिमका घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । समुद्रमा सुनामी (तुफान) आउनु सामान्य कुरा हो । हामीले यस्तो देखिरहेका पनि हुन्छौं । तुफानका घटनाबारे हामीलाई धेरै कुरा थाहा नै छ । तपाईंले पनि तुफान र यसको सूचना सुन्नु भएकै होला ।
ब्राजिलको नदीमा सुनामी आयो तर अर्कै तरिकाबाट जो एकदमै रमाइलो र रोचक छ । के तपाईंले ब्राजिलको नदीमा तुफानको खबर सुन्नुभएको छ ?
यस सुनामीमा नदीको भित्रबाट साना कछुवाहरूको पूरै छाल आयो । यी कछुवाहरू चाँडै समुद्री तटमा रहेको बालुवातिर लागेका थिए। ब्राजिलको कुन नदीको किनारमा कछुवाहरूको सुनामी आएको थियो र किन ? आउनुहोस् थाहा पाउनुहोस्
ब्राजिलको द वन्यजीव संरक्षण समाज (डब्ल्यूसीएस)ले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा यी हजारौं कछुवाहरूको तस्विर र भिडियो जारी गरेको छ।डब्ल्यूसीएसले बताए कि यो कछुवाहरु दक्षिण अमेरिकी कछुवाका बच्चाहरू थिए जुन केही समयअघि मात्रै अण्डाहरूबाट निस्किएका थिए ।
ब्राजिल अमेजन नदीको शाखा हो जसलाई पुरुस नदी भनिन्छ। यस नदीको किनारमा विशाल दक्षिण अमेरिकी कछुवाहरूका हजारौं टोर्टलेसहरू देखिए। डब्ल्यूसीएसले दुई दिनमा करिब ९२ हजार कछुवाहरू देखिएको कुरा बताएको पहिलो दिन ७१ हजार र दोस्रो दिनमा २१ हजार कछुवा नदीबाट बाहिर निस्केर किनारमा आए।
डब्ल्यूसीएसको रिर्पोट अनुसार एक जोडी कछुवाले प्रायः एक पटकमा ८० देखि १२० अण्डाहरू दिन्छ । यी अण्डाहरूबाट ६० दिनपछि, बच्चाहरु निस्कन थाल्छन् । यस पटक ब्राजिलको अबुफारी जैविक रिजर्भ हुँदै पुरुस नदीको किनारमा कछुवाहरूको सुनामी देखा पर्‍यो ।
विशाल दक्षिण अमेरिकी नदी कछुवाहरू दाँतले अण्डा फटाएर बाहिर निस्कछन्। आफ्नो घोस्लाबाट समुद्री किनारमा निस्कन लगभग एक हप्ता लाग्छ । तिनीहरू बिस्तारै किनारमा उफ्रिन्छन्। सामान्यतया यी कछुवाहरू प्रायः समूहमा बाहिर जान्छन् ।
डब्ल्यूसीएस विशेषज्ञ कैमिला फराराले बताए कि कछुवा यति ठूलो संख्यामा देख्न पाउँदा खुसीको कुरा हो । यो जन्मको ठूलो उत्सव हो । यसले विशाल दक्षिण अमेरिकी नदी कछुवाहरूको प्रजाति बढावा दिन्छ। यी कछुवाहरूको खास कुरा यो हो कि तिनीहरू सँगै जन्मेका छन् र सँगै आफ्नो जीवन पूरा गर्छन् ।
डब्ल्यूसीएसले भन्यो ‘हामी तिनीहरूको संरक्षण र संरक्षणमा मद्दत गर्न यी कछुवाहरूको सामूहिक जन्म र जीवनशैली अध्ययन गर्दैछौं । विशाल दक्षिण अमेरिकी नदी कछुवाको लोप हुने खतरा छन्।’ यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा धेरै सम्झौताहरू भएको छ।
विशाल दक्षिण अमेरिकी नदी कछुवा ल्याटिन अमेरिकाको नदीहरूमा फेला परेको सबैभन्दा ठूलो कछुवाहरू हुन् । पूर्ण वयस्कमा, यी कछुवाहरू ३.५ फिटको हुन्छन्। तिनीहरूको वजन ९० किलोग्रामसम्म हो । यी कछुवाहरूले पानीको जीवन चक्र चलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
Previousतपाईंलाई बारम्बार पिसाब लागिरहन्छ ?
Nextदिउँसो किन सुत्नुहुँदैन ? दिउँसो सुत्दा धनको नाश हुन्छ ?
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार १७:११
सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा र परीक्षण चुनावपछि
५ असार २०७४, सोमबार ०७:४१
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ११:०६
अवैध रुपमा रकम उठाउने एक व्यक्ति पक्राउ
५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १२:५१